အကောင်းဆုံးကမ်းလွန်ဘဏ်လုပ်ငန်း Institution များနှင့်တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်
ဤတွင်အကောင်းဆုံးနဲ့အများဆုံးထောက်ခံအုကူံပတဲ့စာရင်းဖြစ်ပါတယ် ကမ်းလွန်ဘဏ် တရားစီရင်မှု။ ကံကောင်းထောက်မစွာ, ငါတို့ကျယ်ပြန့်သုတေသနကောက်ယူကြသည်။ ထို့ကြောင့်, ငါတို့သည်သင်တို့၏အလုပ်လွယ်ကူအောင်အကြံပေးချက်များနှင့်အကြံဉာဏ်ကိုပူဇော်နိုင်ပါတယ်။ ထိုကဲ့သို့သောအဖြစ်ဤနိုင်ငံများသည်ဘဏ္ဍာရေးဘေးကင်းလုံခြုံရေး, privacy ကို, အဆင်ပြေပေးဥပဒေများရှိသည်နှင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအပေါ်တစ်ဦးယှဉ်ပြိုင်ပြန်လာဆက်ကပ်။
ကျော် $ 250,000 ၏ကနဦးသိုက်များအတွက်:
OffshoreCompany.com ဆွစ်ဇာလန်နှင့်အခြားအဆင်သင့်တရားစီရင်မှုအတွက်ဘဏ်အကောင့်အတွက်အထူးပြုသည်။ ဒါကြောင့်တစ်ဦးတိုင်ပင်ဆွေးနွေးပုံစံဖြည့်စွက်သို့မဟုတ်ဤစာမျက်နှာပေါ်တွင်ဖုန်းနံပါတ်များကိုတစ်ဦးကိုသုံးပါ။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, သငျသညျပေါ်မှာငါတို့တစျခုလုံးကိုအပိုင်းသွားရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ် ဆွစ်ဘဏ်လုပ်ငန်း.
$ 250,000 အောက်မှာသိုက်အဘို့, ဒီမှာအကြံပြုတရားစီရင်မှုနေသောခေါင်းစဉ်:
ကာရစ်ဘီယံ (နိုင်ငံအများအပြား - အသေးစိတ်ကိုအထက်ပါဖုန်းနံပါတ်မခေါ်)
အခွန်ဆိပ်နိုင်ငံတွေမှာတော့အကောင့်တစ်ခုဖွင့်လှစ်စိစစ်နိမ့်သည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်, privacy ကိုပိုမိုမြင့်မားသည်။ ဥရောပတရားစီရင်ပိုင်ခွင့်ထဲမှာသို့သော်အဖွဲ့ဝင်ဘဏ်များများအတွက်ကြောင့်စေ့စေ့လိုအပ်ချက်များကိုတိုးမြှင့်ကြောင်းသဘောတူညီချက်များရှိပါတယ်။ ထို့ကြောင့်အလားအလာအကောင့်ကိုင်ဆောင်သူအပို Know-သင့်ရဲ့-ဖောက်သည်စာရွက်စာတမ်းများထုတ်လုပ်ရန်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ သူတို့ကဒီသဘောတူညီချက်ဥရောပသမဂ္ဂချွေတာသုံးစွဲအခွန်ညွှန်ကြားချက် 2005 တောင်းဆိုခဲ့သည်။
ထို့နောက်ဒီဇင်ဘာလ 2014 အတွက်ဥရောပသမဂ္ဂ၏ကောင်စီညွှန်ကြားချက် 2014 / 107 / EU ကမွေးစားခဲ့သည်။ ဤ "အခွန်ဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များ (အပေါ်ဘဏ် / အစိုးရပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများအတွက်ထောက်ပံ့အီးယူအပြန်အလှန်ကူညီစောင့်ရှောက်ရေးညွှန်ကြားချက်") ။ ထို့ကြောင့်ဘဏ်များရရှိခဲ့သည်အကျိုးစီးပွားများနှင့်ခွဲဝေသတင်းပို့အဖြစ်ကတခြားငွေထုတ်ဝင်ငွေ။ ကမှတဆင့်တိုင်းပြည်များအပြန်အလှန်အခြားနိုင်ငံများနှင့်အတူအခွန်သတင်းအချက်အလက်ဖလှယ်။
ဤရွေ့ကားညွှန်ကြားချက်ဆိုးရွားစွာကဘာသာရပ်ဖြစ်ကြောင်းအချို့သောနိုင်ငံများ၌ဘဏ်လုပ်ငန်း privacy ကိုထိခိုက်စေလိမ့်မည်။ ထို့အပြင်အီးယူအခွန်ညွှန်ကြားချက်ကမ်းလွန်ဘဏ်များအတွက်ငွေထုတ်၏လျှို့ဝှက်ချက်များနှင့် privacy ကန့်သတ်လိမ့်မည်။ ရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်စေရန်, ဤအထုံးအဖွဲ့တို့ကိုအောက်မှာသောတရားစီရင်မှုအတွက်တည်ရှိပြီးဘဏ်တွေသာသက်ဆိုင်ပါသည်။
သြစတြီးယား, ဘယ်လ်ဂျီယံ, ဆိုက်ပရပ်စ်, ချက်သမ္မတနိုင်ငံ, ဒိန်းမတ်, စတိုးနီးယား, ဖင်လန်, ပြင်သစ်, ဂျာမနီ, ဂရိ, ဟန်ဂေရီ, အိုင်ယာလန်, အီတလီ, လတ်ဗီးယား, လစ်သူ, လူဇင်ဘတ်, မော်လ်တာ, နယ်သာလန်, ပိုလန်, ပေါ်တူဂီ, Slovakia လိုဗေးနီးယား, စပိန်, ဆွီဒင်နှင့် ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်း။ အီးယူနိုင်ငံများအပြင်, ညွှန်ကြားချက်ကိုလည်းအီးယူနှင့်အင်ဒိုရာ, လီချင်စတိန်း, မိုနာကို, ဆန်မာရီနိုနှင့်ဆွစ်ဇာလန်အကြားသဘောတူညီချက်များပါဝင်သည်။
တစ်ဓနသဟာယ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ကြောင်းမဆိုတရားစီရင်မှုအီးယူအခွန်ညွှန်ကြားချက်မှဘာသာရပ်ဖြစ်ကြသည်။ ထို့ပြင်၏အုပ်ချုပ်မှုအောက်တွင်ဖြစ်ကြောင်းဆိုနိုင်ငံတွေ, ဒါမှမဟုတ်ထိုလူမျိုး၏ပစ္စည်းအဟောင်းလက်ခံအဖြစ်ကောင်းစွာဖြစ်ကြသည်။ အခြားသူများကလည်းလိုလိုလားလားထိုကဲ့သို့သောဆွစ်ဇာလန်နှင့်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအဖြစ်, လိုက်နာစေနိုင်သည်။
ရိုးရှင်းစွာဖော်ပြထားသည် 2014 အီးယူအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများအကြားသဘောတူညီချက်အဖြစ်အနီးအနားကနိုင်ငံတွေစာရင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာအထူးသ, ဘဏ္ဍာရေးသို့မဟုတ်အရောင်းအဝယ်သတင်းအချက်အလက်ဖလှယ်ဘို့ခွင့်ပြုပါတယ်။ အီးယူသည် "သတင်းအချက်အလက် option ကိုအလိုအလျောက်လဲလှယ်" ဒီသဘောတူညီချက်ခေါ်ဆိုနှင့်ညွှန်ကြားချက်များအမာခံများဖြစ်ပါတယ်။
အီးယူဗားရှင်းပြုတူညီတဲ့အကျိုးခံစားခွင့်များစွာကိုပေးများစွာသောအခြားကမ်းလွန်တရားစီရင်မှုရှိပါတယ်။ ဒါပေမဲ့သူတို့ကအီးယူညွှန်ကြားချက်မှဘောင်းမရှိကြပေ။ ပြောစရာမလိုတော့ပါဘူး, ဒီမကြာခဏ privacy ကိုရှာကြံထားတဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူသို့မဟုတ်ငွေထုတ်များအတွက်အလွန်အရေးကြီးသောထည့်သွင်းစဉ်းစားဖြစ်ပါတယ်။ သငျသညျအီးယူညွှန်ကြားချက်အစီရင်ခံဖို့တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်ဘာသာရပ်နှင့်တွေ့ဆုံရန်မနိုင်မယ့်တိကျတဲ့အကျိုးကျေးဇူးလိုပေမည်ဖြစ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ အမှန်မှာဒီအရေးပါတဲ့ထည့်သွင်းစဉ်းစားဖြစ်ပါတယ်။ သို့သျောလညျးသငျသညျအလိုအလြောကျက non-အီးယူညွှန်ကြားချက်တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်လိုက်နာရန်အတွက်အမြဲဘဏ်အားအလွန်အကျိုးရှိကြောင်းကိုမယူဆသငျ့သညျ။
အလားအလာငွေထုတ်ကနဦးအပ်ငွေပမာဏကိုလိုအပ်ချက်များကိုတွေ့ဆုံဆိုပါစို့။ သူကသူ့ဘဏ်နှင့်၎င်း၏တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်နှင့်အတူ alignment ကို၌သူ၏ဘဏ်လုပ်ငန်းရည်မှန်းချက်များရှိပါတယ်။ ကဲ့သို့သော, ထိုကဲ့သို့သောဆွစ်ဇာလန်အဖြစ်ထူထောင်ကမ်းလွန်နေရာများတွင်ပိုကောင်းသည်သူ၏လိုအပ်ချက်များကိုကိုက်ညီနိုင်ပါတယ်။ သို့သော်အီးယူအခွန်ညွှန်ကြားချက်မှဘာသာရပ်မဟုတ်အလွန်အရည်အချင်းတရားစီရင်မှုရှိပါတယ်။ သူတို့က "ထူထောင်" တရားစီရင်မှု၏သူတို့အားများထက်လွန်စွာနိမ့်ကနဦးအပ်ငွေလိုအပ်ချက်များကိုနိုင်ပါသည်။ ဥပမာအားဖြင့်, စိန့်ဗင်းဆင့်နှင့်ဘေလီဇ်တူသောအချို့သောတရားစီရင်မှုစတင်ရန် $ 2000 အမေရိကန်ကဲ့သို့အနည်းငယ်သာလိုအပ်နိုင်ပါတယ်။
အလယ်ပိုင်း 90 ရဲ့နှင့်9/ 11 အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုများ၏အင်တာနက်ပေါက်ကွဲမှုမီ, ဘဏ်လုပ်ငန်းကမ္ဘာကြီးအများကြီးရိုးရှင်းတဲ့ဖြစ်ခဲ့သည်။ ဥပမာအားဖြင့်, အကောင့်ကိုင်ဆောင်သူများနှင့်ကမ်းလွန်ဘဏ်များအတွက်အလားအလာရှိသောငွေထုတ်စာသားဘဏ်သို့လမ်းလျှောက်ခဲ့ရတယ်။ ဒါကအကောင့်တစ်ခုဖွင့်လှစ်နိုင်ရန်အတွက်လိုအပ်ခဲ့သည်။ တနည်းအားဖြင့်သူတို့ကရိုးရိုးအဲဒီလိုလုပ်ဖို့အနေနဲ့လုပ်ပိုင်ခွင့်ကိုယ်စားလှယ်ပေးပို့နိုင်မည်ဖြစ်သည်။ သူတို့က, အကောင့်များတည်ထောင်ရန်ရန်ပုံငွေများစတင်မည်, ဒါမှမဟုတ်လူတစ်ဦးအတွက်သဘောတူညီချက်များတရားဝင်ခဲ့ရသည်။ အဟောင်း "သော့ခတ်သေတ္တာနှင့်သော့" method ကိုအထွဋ်အမြတ်တည်းဟူသောစိုးစံလေ၏။
သို့သော်နှစ်လယ်ပိုင်း 90 ရဲ့ကတည်းကကြီးမားတဲ့ပြောင်းလဲမှုရှိပါသည်။ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းအများအပြားဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများတွင်ယခင်ကမသိမမြင်နိုင်သောနည်းပညာတကယျ့ပေါက်ကွဲမှုရှိခဲ့သည်။ သင်တန်း၏ဤကမ်းလွန်ဘဏ်တို့ပါဝင်သည်။
သွားကြောင်းအမှန်တကယ်ဘဏ်သို့လမ်းလျှောက်ဖို့ရှိခြင်းတို့လက်ထက်၌ဖြစ်ကြသည်။ သင့်ရဲ့အနီးဆုံးကီးဘုတ်အဖြစ်နီးစပ်အဖြစ်န်ဆောင်မှုများ, ယခုအများဆုံး။ သင်သိသည့်အတိုင်းယခုကြှနျုပျတို့အကောင့် World Wide Web access ကိုရှိသည်။ ငါတို့သည်လည်းဒက်ဘစ်ကဒ်နှင့်အီလက်ထရောနစ်ရန်ပုံငွေများလွှဲပြောင်း၏ထွန်းနဲ့တူခရက်ဒစ်ကဒ်ရှိသည်။ ထို့အပွငျ, ကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်ချောင်းထိပ်မှာကို virtual လက်မှတ်ပေါင်းဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, အင်တာနက်ရန်နီးပါးအဆမဲ့ access ကို။ ထို့ကြောင့်ကမ်းလွန်ဘဏ်တစ်ဦးချင်းစီနှင့်ကုမ္ပဏီများအတွက်ရိုးရှင်းတဲ့ဖြေရှင်းချက်သို့တော်လှန်ခြင်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
သင့်ရဲ့ဘဏ်က Grand Canyon အပြည်နယ်သို့မဟုတ်ရန်းကေမန်၌တည်ရှိ၏လျှင်အရေးမထားဘူး။ ဘဏ်တွေကိုဆက်ကပ်သော features တွေအများစုဟာရုံ mouse ကိုပယ်ရှားကိုကလစ်နှိပ်ပါဖြစ်ကြသည်။ သင်ဟာခရီးဦးကြိုပြုခြင်းနှင့်ကြိုတင်ကာကွယ်မှုများအားလုံးကိုလိုက်နာသာဥပဒေရေးရာလှုပ်ရှားမှုများတွင်ထိတွေ့ဆက်ဆံယူဆကြပါစို့။ သို့ဆိုလျှင်မည်သည့်သိုက်သို့မဟုတ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၏လျှို့ဝှက်ချက်များကအစဉ်အဆက်ခဲ့သကဲ့သို့လုံခြုံဖြစ်ပါတယ်။
ကမ်းလွန်ဘဏ်အကောင့် ပုံမှန်ပြည်တွင်းဘဏ်အကောင့်ကဲ့သို့တူညီသောထုံးစံ၌လည်ပတ်။ အဆိုပါဘဏ်အကောင့်ကိုဖွင့်လှစ်။ အပေါ်မှာတင်သော, client ကိုဘဏ်အကောင့်ဒက်ဘစ်ကဒ်သို့မဟုတ်ခရက်ဒစ်ကဒ်ကိုလက်ခံ၏။ ငွေထုတ်အွန်လိုင်းလက်လှမ်းရှိသည်။ ဝါယာကြိုးလွှဲပြောင်းလုပ်နေတာနှင့်ပုံမှန်ဘဏ်အကောင့်အရောင်းအဖျော်ဖြေလွယ်ကူပါတယ်။ ရိုးရှင်းစွာအအွန်လိုင်းလော့ဂ်နှင့်ညွှန်ကြားချက်များကိုလိုက်နာပါ။ ကမ်းလွန်ဘဏ်များအတူတူအဆငျပွမှေုမြားအမြားအပွားပူဇော်နှင့်များစွာသောအကြီးဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုကိုဆက်ကပ်။ သင့်ရဲ့အဖွဲ့အစည်းကိုရွေးချယ်ခြင်းအခါသင်သည်သင်၏မြင်ကွင်းအဘို့အညာဘက်သော provider ကရှေးခယျြအရေးကြီးပါသည်။
ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်းများစွာသောကမ်းလွန်ဘဏ်လုပ်ငန်းအဖွဲ့အစည်းများသင်ကဲ့သို့နည်းနည်းအဖြစ် $ 2000 depositing ကဘဏ်အကောင့်ဖွင့်လှစ်ရန်ခွင့်ပြုပါလိမ့်မယ်။ သည်အခြားကိစ္စများတွင်ဘဏ်အပေါ်မူတည်ပြီးသင်ကဒီထက်ငွေသွင်းနိုင်ပါတယ်။ ထို့ပြင်အကြံပြုကမ်းလွန်ဘဏ်အကောင့်ပေးသူအပေါငျးတို့သအလွန်အမင်းစည်းမျဉ်းသတ်မှတ်နှင့်တင်းကျပ်သောအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ privacy ကိုဥပဒေများကိုလိုက်နာနေကြသည်။ ပုဂ္ဂလိကအကောင့်ပုံမှန်အားဖြင့်မြင့်မားကနဦးအပ်ငွေလိုအပ်သည်။ သို့သော်သူတို့သည်အလုံးစုံအကောင့်ရည်မှန်းချက်များနှင့်စီမံကိန်းပေါ် မူတည်. ညှိနှိုင်းဖြစ်ကြသည်။
OffshoreCompany.com ကမ္ဘာတဝှမ်းဘဏ္ဍာရေးဝန်ဆောင်မှုများကိုပံ့ပိုးပေးသုတေသီ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ clients များဖုန်းဖက်စ်, အီးမေးလ်နှင့်အင်တာနက်မှတဆင့်၎င်းတို့၏အကောင့်ကိုဝင်ရောက်နိုင်သည်ဟုသေချာပါစေ။ ထို့အပြင်ကျနော်တို့သူတို့သည်ငါတို့ဖောက်သည်များ၏လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဖို့စေ့စေ့နားထောင်နေကြသည်သေချာအောင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကောင်းဆုံးလုပ်ပါ။ Plus အားကျွန်ုပ်တို့အဖြစ်သတိပညာနှင့်ပုဂ္ဂလိကဖြစ်ကြောင်းသေချာချင်တယ်။
မကြာခဏဆိုသလို, သင့်ကမ်းလွန်ဘဏ်အကောင့်လက်ကျန်ငွေအတိုးရရှိမည်ဖြစ်ပါသည်။ သင်တို့သည်လည်းတစ်ဦးကမ်းလွန်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအကောင့်ကို set up ဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုမမေးပေမည်။ အကျိုးစီးပွားနှင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအကျိုးအမြတ်များသောအားဖြင့်ဘဏ်ကိုဖွင့်တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်အတွက်ဒေသခံအခွန်အကောက်ဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များအခမဲ့ဖြစ်ကြသည်။ အဆိုပါအတိုးနှုန်းများသောအားဖြင့်ပိုမိုမြင့်မားဖြစ်ကြောင်းနှင့်အခကြေးငွေယှဉ်ပြိုင်ကြသည်။ ရေနံကုမ္ပဏီများအပါအဝင်အတော်များများကံဇာတာ 500 ကုမ္ပဏီများ, ကမ်းလွန်ဘဏ်၏အားသာချက်ယူပါ။ ပိုမိုလူကြိုက်များအခွန်ဆိပ်တရားစီရင်မှု၏အချို့ရွေးချယ်ဖို့ရာကနေဦးပထမဦးဆုံးနှုန်းကိုဘဏ်များရာပေါင်းများစွာရှိသည်။
ပုဂ္ဂလိကတရားစီရင်မှုအတွက်ဘဏ္ဍာရေးအဖွဲ့အစည်းများနိုင်ငံခြားအစိုးရများမှဖောက်သည်အကောင့်သတင်းအချက်အလက်သတင်းပို့ကြပါဘူး။ သူတို့ကပင်သူတို့၏ကိုယ်ပိုင်ကသတင်းပို့ကြပါဘူး။ ဒါကြောင့်အဲဒီလိုလုပ်ဖို့အကောင့်ကိုင်ဆောင်သူမှတက်သည်။ တစ်ဦးတာဝန်ယူကုမ္ပဏီအဖြစ်, သင်တန်း, ကျွန်တော်သင်နှင့်အတူလိုက်နာကြောင်းအကြံပြု အခွန် သငျသညျတာဝန်ရှိသည်ဟုထားတဲ့ဖို့တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်၏ဥပဒေများကို။ အမေရိကန်အခွန်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းဝင်ငွေအပါအဝင်နိုင်ငံအများအပြား။ ဒါကြောင့်ပထမဦးဆုံးအကြှနျုပျတို့သညျသင့်ကုမ္ပဏီနှင့်အကောင့်တည်ထောင်ရန်ကူညီပေးသည်။ ထို့နောက်ကျွန်တော်နှင့်သင့်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဝင်ငွေအခွန်လိုက်နာမှုအပေါ်ကူညီနိုင်သည်ကိုအလွန်တတ်ကျွမ်းနားလည်တဲ့နေသော CPAs ရှိသည်။
OffshoreCompany.com ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအဆောက်အဦများ, ဘဏ်အကောင့်, privacy နဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးအစီအစဉ်များထောင်ပေါင်းများစွာ၏တည်စေ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည်များ၏ဘဏ္ဍာရေးကာကွယ်ခြင်းနှင့်ကြီးထွားလာကျွန်တော်တို့ရဲ့အကြီးမားဆုံးစိုးရိမ်ပူပန်မှုများရှိပါသည်။
ကဆွစ်ဇာလန်ရိုက်နှက်ရန်ခက်ခဲဖြစ်ပါတယ် privacy ကိုမှကြွလာသောအခါကမ်းလွန်ဘဏ်လုပ်ငန်းအဖွဲ့အစည်းများ, အကြိုးကြေးဇူးမြား၏ကျယ်ပြန့်အမျိုးမျိုးကိုဆက်ကပ်။ ကျနော်တို့အပေါ်တစ်ဦးပြည့်စုံအပိုင်းပေးအပ်ခဲ့ကြ ဆွစ်ဘဏ် သငျသညျပုဂ္ဂလိကဘဏ်အကောင့်အကြောင်းပိုမိုလေ့လာသင်ယူနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
> ကျအခနျး 12 မှ